उदयपुरको एक परिवारमा देखियो अनौठो रोग: दुई जनाको निधन, रो’ग पत्ता नलाग्दा वंश नै ना’श हुने खतरा ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/उदयपुरको एक परिवारमा देखियो अनौठो रोग: दुई जनाको निधन, रो’ग पत्ता नलाग्दा वंश नै ना’श हुने खतरा !
उदयपुरको मध्यपहाडी रौतामाई गाउँपालिका–६ को नामन्तमा एउटै सन्तानका तीन परिवारमा अनौठो रो’ग देखिएको छ । रो’गवाट केहीको नि’धन भइसकेको छ भने केही अझै उपचारार्थ छन् । तर रो’ग के हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । ५ वर्ष अघि घरबाट मलेसिया गएका जेठोको सन्तान दुर्गाबहादुर समाल वि’रामी भएर आए । उनी घर आएपछि शरीर का’म्ने र ह’ल्लिने गर्न थाले । सुरुमा स्थानिय स्वास्थ्य संस्थामा देखाउँदा रो’ग पत्ता लागेन । त्यसपछि पटक पटक काठमाडौं आएर जाँ गराउँदा पनि उनको रो’ग पत्ता लाग्न सकेन । रो’ग लागेको एक वर्ष पछि उनको नि’धन भयो । त्यही प्रकृतिको रो’ग उनको श्रीमतीमा पनि देखियो । उनको पनि रो’ग पत्ता नलागेरै नि’धन भयो । शरीर का’म्ने र ह’ल्लिने यो रो’गबाट परिवारका २ जना सदस्य दुर्गाबहादुर समाल मगर र उनकी श्रीमती अम्बिका समाल मगरको नि’धन भयो ।
एउटै बाजे र दाजुभाइका सन्तानमा यो अज्ञात रो’ग देखा परेको छिमेकीले बताएका छन् । विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । अहिले यो अज्ञात रो’ग माइलाका सन्तान बलबहादुर समाल मगर, बुहारी हीरामाया आलेमगर र उनीहरुको घर परिवारतर्फ सरेपछि दुवै समाल परिवारका ९ जना सदस्य सिकिस्त बिरामी परेको छिमेकी बताउँछन् ।
अहिले यो रो’ग परिवारका अन्य सदस्यमा पनि देखिएको छ । यो रो’गबाट परिवारका जेठा दाजु, माइला दाजु र साइला दाजुका सन्तान र तीनपुस्ते वंशभित्रका सम्पूर्ण समाल मगरमा सर्दै गएको छ । पाँच वर्ष देखि रोग परिवारका सदस्यमा सर्दे जाने तर रोग क ेहो पत्ता नलागी ज्या’न जान’ थालेपछि मगर परिवार चि’न्तामा छ । अब वंश नै नास हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै मगर परिवारले सहयोगको अपिल गरेका छन् । अहिले समाल मगरको सम्पूर्ण परिवार नै यो रोगबाट ग्र’सित छन् ।